Ny valizy sy ny seza valizy metaly no ampahany lehibe amin'ny valves amin'ny vy mipetraka. Natao ho an'ny tsindry mafy, ny mari-pana ary ny toetr'andro mahery vaika, toy ny fanapahana na fampifandraisana granula matevina, slurry voarendrika, herin'ny arintany, cinderatra manaparitaka, rano etona na ranon-javatra hafa sns. vahaolana amin'ny kitapo baolina + seza ho an'ny mpanjifa satria mila mikapoka ny baolina sy ny seza alohan'ny handefasana azy hanompo. Nandritra ny taona maro, namolavola tokana ...
Ball manokana QC-S05
Anaran'ny vokatra ： Specialball QC-S05 habe ： NPS 2 ”~ 12” （DN50 ～ 300 Rating Naoty fanerena: Kilasy 150 ~ 300 (PN20 ~ 50) Fitaovana fototra: ASTM A105 (N), A350 LF2, A182 F304 (L), A182 F316 (L), A182 F6A, A182 F51, A182 F53, A564 630 (17-4PH), Monel, firaka sns. fonosana bubble- baoritra-baoritra- tranga plywood. Ny vokatra dia azo namboarina mifanaraka amin'ny sary avy amin'ny mpanjifa